कसरी दौडने बिहान ? - ज्ञानविज्ञान
बिहान–बिहान दौडनु भनेको अरू विभिन्न प्रकारका व्यायाम गरेबराबर हो । कतिपय अवस्थामा दौडनु वा छिटो–छिटो हिँड्नु नै सर्वोत्तम हुन्छ । खासगरी दीर्घरोगीहरू, जसले कडा व्यायाम गर्न हुँदैन, उनीहरू दौडनुपर्छ । तर, दौडने पनि तरिका हुन्छ । कसरी दौडँदा बढी लाभदायक हुन्छ त ?
ध्यान दिनुस् यी कुरा :
Topics #दौडने #बिहान
Don't Miss it यी हुन् खतरनाक रोगहरु निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने
Up Next यसो गरौँ निमोनियाबाट बच्न